‘जनताको जनवाद’ भन्ने शव्दावलीले हाम्रो लक्ष्यलाई पक्रन सक्दैन’: सरल सहयात्री - Nepali Online News Media-shikharnews.com
‘जनताको जनवाद’ भन्ने शव्दावलीले हाम्रो लक्ष्यलाई पक्रन सक्दैन’: सरल सहयात्री
सरल सहयात्री, जसले जीवनको सबैभन्दा उर्जाशील समय देश र जनताको मुक्तिका खातिर युद्धमैदानमा बिताए । अनेक उल्झनसँगै आरोह÷अवरोहका बीच उनको संघर्षमय राजनीतिक जीवनयात्रा अघि बढ्यो ।
२०४८ सालमा सिन्धुपाल्चोकको मानेश्वाँरामा गठित बाल संगठनमा संगठित भएर राजनीतिक जीवन सुरु गरेका उनी २०४९ सालमा तत्काल अखिल छैठौंको जिल्ला सदस्य भए । २०५५ सालमा अखिल क्रान्तिकारीमा आवद्ध भएपछि उनी तत्कालिन माओवादीद्वारा सञ्चालित जनयुद्धमा होमिए ।
२०५७ सालमा जनमुक्ति सेनाको सिपाहीहुँदै उनले राजनैतिक कमिसार र ब्रिगेड कमाण्डरसम्मको जिम्मेवारी कुशलापूर्वक सम्हाले । जनयुद्धका क्रममा भएका विभिन्न दोहोरो भीडन्तमा परी उनी चारपटक गम्भीरभन्दा गम्भीर घाइते भए । जनयुद्धकै क्रममा उनले आफ्ना दाजु शम्भु पौडेल र बहिनी रिता पौडेललाई गुमाउनुपर्यो ।
तत्काली शाही सेनाले घरमा अन्धाधुन्ध गोलीबारुद बर्साउँदा भाउजू गम्भीर घाइते भइन् । यसरी अतिविषम परिस्थितिका बीच राजनीतिक आन्दोलनमा निरन्तर सक्रिय सरल सहयात्री २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट संविधानसभा सदस्यको उम्मेदवार भए । तर, उनी त्यतिबेला थोरै मतान्तरले पराजित हुन पुगे । अहिले उनी जनसाँस्कृति महासंघ नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । स्पष्टवक्ता र युवामा उर्जा भर्न माहिर उनी अहिले पनि भूगोलको राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय छन् । राजनीतिक परिवर्तनकै लागि आफ्नो निजी जीवन समर्पण गरेर लागिपरेका युवा नेता सरल सहयात्री सँगको संक्षिप्त कुराकानीः
संसारमा समाजवादी व्यवस्था कमजोर अवस्थामा पुग्दै गर्दा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाउँने र अगाडि बढाउने सिद्धान्तअनुरुप कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा तत्कालिन नेकपा (एमाले)ले जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम अगाडि ल्यायो । र त्यही परिवेशमा ‘नौलो जनवादको स्थापना गर्न सामन्तवादी सत्तालाइ समुल नष्ट नगरी सम्भव छैन’ भन्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्धको थालनी ग¥यो ।
न मेरो ती सरकारी सिपाहीहरूसँग व्यक्तिगत दुश्मनी थियो न तिनीहरुको मसँग ! हामी देशलाइ प्रगतिको मार्गमा अगाडि बढाउन यथास्थितिवादी शासकका विरुद्ध लडेका थियौं र तत्कालिन सरकारलाई त्यो गलत लागेकोले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेको थियो । शान्ति प्रक्रिया शुरु भयो । सम्भवतः सरकारका अन्य निकायहरु भन्दा प्रहरी÷सेनाका जुनियर कमाण्डर र सिपाहीहरुसँग निकै छिटो हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिन पुग्यो । किनभने हाम्रो दुख र भावना एकै खालको थियो, तर मिसन फरक । जब मिसन उस्तै जस्तो हुन पुग्यो हामी छिटो मित्र भयौं ।
३. एमाले–माओवादी एकता विचारको नभई सत्ता स्वार्थको कारण मात्रै भएको भनेर टिप्पणी पनि हुने गरेको छ नि !
ठाडै अपमान गर्नेगरी कार्य विभाजन हुँदा र व्यक्तिगत रुपले अन्याय हुँदा कसलाई मज्जा लाग्छ र ? आफ्नो समकालिन मित्र माथि गयो भनेर होईन, आफूमाथि अन्याय भयो भनेर ‘झोक’ चल्छ । मैले ‘झोक’ शब्द यसकारण प्रयोग गरेँ कि, यसमा संघर्ष मिसिएको छ । हो, मलाई दुख लागेको छैन तर नराम्ररि झोक चलेको छ । आफूमाथि ठाडा– ठाडो अन्याय हुँदा समेत झोक नचल्ने मान्छेले केही पनि गरिखाँदैन । मेरो व्यक्तिगत हैसियतको लागि मैले सम्हालेको कुनैपनि संगठनको हवाला दिन चाहदिनँ । तर म चुनौति दिएर भन्न चाहन्छु, मेरो समकालीन साथीहरुको तुलनामा कुनै नेताको छोरा, भतिजो, भाई, भान्जा, ज्वाईं, साला, भेना वा केही नभएपनि उहीं थरको वा एउटै गाउँको हुनुपर्ने मूल्यांकन बाहेक कुनैपनि मूल्यांकनधारी व्यक्तिले मेरो सक्रियता, प्रतिवद्धता, प्रतिस्पर्धा वा वैचारिक स्पष्टता र अन्य आवश्यक पर्ने तर्कबाट एक पोइन्ट मात्रै माइनस गर्ने हिम्मत राखोस्, म त्यो व्यक्ति सामू माफि माग्न तयार छु ।
कुनै पद वा प्रतिष्ठाको कारणले मेरो राजनैतिक यात्रा रोकिने होइन । र मेरो राजनीतिको उद्धेश्य केवल पद मात्र पनि होइन । बिल्कुलै सत्य के हो भने, पद यात्राको सारथि भने हुन सक्छ । राम्रो सारथिले यात्रालाई कुशल र सहज बनाइदिन्छ । सारथिबिना युद्धनै नहुने हो र ? अब त झन् रथबिना पनि रथ भन्दा कमजोर नहुने गरी कुद्छु । सारधिबिना पनि विकृति र आन्तरिक सामन्तवादविरुद्धको युद्ध निरन्तर लड्छु ।